‘चिनियाँ सैन्य सहयोग बढ्दै जानेछ’ - अन्तर्वार्ता - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
‘चिनियाँ सैन्य सहयोग बढ्दै जानेछ’
रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले बेइजिङमा भने— नेपालमा लगानी बढाउन चीनलाई आग्रह गरेँ
चीनले असोज २४–२६ गते आयोजना गरेको सातौं स्याङ्ग शान मञ्चमा सहभागी हुन बेइजिङ आएका रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले मंगलबार चिनियाँ रक्षामन्त्रीसँग भेटेर दुई पक्षीय सैन्य सहयोगबारे छलफल गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को सदस्यसमेत रहेको चीनका रक्षामन्त्रीसँगको भेटपछि नेपाल–चीन सैन्य सम्बन्ध तथा आदानप्रदानका विषयमा रक्षामन्त्री खाँडसँग बेइजिङमा पत्रकार लक्ष्मी लम्सालले गरेको वार्ता :
बेइजिङ्गमा भएको सातौं स्याङ्ग शान मञ्चमा नेपालको सहभागिता कस्तो रह्यो?
आतंकवादको अवस्था, प्रभाव र यसको निराकरणका लागि हामीले गर्नुपर्ने संयुक्त प्रतिवद्धता भन्ने विषयमा मेरो प्रस्तुती थियो। मैले नेपालमै साथीहरुसँग छलफल गरेर एउटा पेपर तयार गरेको थिएँ। मैले संसारभरिबाट आतंकवादलाई परास्त गर्नका लागि सबै देशहरुमा शान्ति र मैत्रीभाव हुनु जरुरी रहेको बताएँ। मित्रता र जनताको सहकार्यमा संसारमा शान्ति र स्थिरता दिन सकिन्छ। सबै मुलुकले विश्व शान्तिका लागि सहअस्तित्वलाई स्वीकार्दै राष्ट्रसंघसामु गरिएका प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरिबी निवारण र रोजगार वृद्धिलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्‍यो। कतिपय आपसी र बहुपक्षीय समस्याहरुलाई वार्ताद्वारा टुंग्याउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्‍यो। आतंकवादले आधुनिक सूचना प्रविधिलाई प्रयोग गर्न नसकोस् भन्नेमा चनाखो हुनुपर्‍यो नत्र यसको दुरुपयोगले झन् ठूलो खतरा निम्तिनसक्छ भनेर धारणा राखें।
मञ्चपछि चिनियाँ रक्षामन्त्रीसँग पनि भेट भएछ, कुराकानी कस्तो भयो?
चिनियाँ रक्षामन्त्रीसँग झण्डै ४५ मिनेट मेरो भेटवार्ता भयो। नेपाल चीन सैन्य सहयोग र द्विपक्षीय हितका बारेमा कुराकानी भए। मैले चिनियाँ रक्षामन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणमा आउन निम्ता दिएँ।
नेपाल आउने भए त?
उत्सुकता देखाएका छन्। तर केही समय लाग्छ होला भनेका छन्। मैले छिमेकमै छौं, हवाई यातायातले धेरै समय पनि लाग्दैन। एकदिन आउने, अर्को दिन जाने गरी आउन पनि सकिन्छ भनें। हाम्रो भेटघाट भएकै दिन, मंगलबार साँझ नै राष्ट्रपतिसँग मेरो भेटघाट छ, कुरा राख्छु भनेका थिए।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणबारे पनि केही कुरा भयो कि?
त्यस्तो ठोस कुरा केही भएन। तर नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री लगायत नेपाली जनता चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका लागि निकै उत्सुक छौं भनेर सुनाएँ।
भेटमा सैन्य सहयोग आदानप्रदानबारे केही ठोस् कुरा भयो?
ठोस सहायताको कुरा त अहिले भएन तर सैद्धान्तिक तहमा छलफल भएको छ। चिनियाँ रक्षामन्त्रीले चीनले गरिरहेको सहयोगलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्। सम्बन्ध विस्तारका लागि उच्चस्तरीय भ्रमणका कुराहरु पनि उठे। दुवै देशबाट उच्च सैन्य अधिकृतको आपसी भ्रमण आदान प्रदानबारे छलफल भयो। उच्च राजनीतिक भ्रमणको क्रममा पनि नेपालको आवश्यकता र मागका आधारमा चिनियाँ सैन्य सहयोग बढ्दै जाने देखिन्छ। आगामी दिनमा सैन्य क्षमता अभिवृद्धिमा नेपाललाई चिनियाँ सहयोग थप हुँदै जाने विश्वास चिनियाँ रक्षामन्त्रीले दिलाएका छन्।
अहिले नेपाल–चीन सैन्य सम्बन्ध कस्तो छ?
एकदमै सौहार्द्रपूर्ण छ। चीनमा नेपाली सैन्य अधिकृतहरु तालिमका लागि आउँछन्। हाइअल्टिच्युड तालिमका लागि चीन लगायत अन्य मुलुकका सैन्य अधिकारीहरु नेपाल आउँछन्। शान्ति मिसनमा सहभागि हुनका लागि पनि नेपालको तालिम केन्द्रमा उनीहरु आउँछन्। नेपालमा सैन्य तालिम केन्द्रलाई चाहिने परम्परागत सहयोग र चीनको तर्फबाट लजिस्टिक सपोर्ट पनि छ। विपद व्यवस्थापनमा पनि चीनको प्रतिवद्धता निरन्तर छ।
नेपाल चीनबीच आपसी सम्बन्ध चाहीँ कस्तो छ?
नेपालमा चीनको मुख्य चासो सुरक्षा नै हो । हामी छिमेकी भएकाले नेपालमा शान्ति, स्थिरता तथा सम्वृद्धि भएमा सम्पूर्ण क्षेत्रको शान्ति र स्थिरतामा बल पुग्छ भन्ने कुरामा चीन सहमत छ। रक्षामन्त्रीको हैसियतमा भए पनि मैले विकास निर्माणमा चिनियाँ सहयोगमा जोड दिइयोस्, चिनियाँ उद्यमी व्यवसायीलाई नेपालमा लगानी गर्न पठाइदिनुस् भनें। चिनियाँ रक्षामन्त्री हाँसे र हामी रक्षामन्त्री भएपनि यो विषय महत्वपूर्ण हो भनेर गम्भिर भए।
दुई देशबीच जनस्तरमा कस्तो सम्बन्ध छ?
बेइजिङमा मलाई अरनिकोले बनाएको श्वेत चैत्य हेर्न लगिएको थियो। मलाई निकै खुशी र गर्व पनि लाग्यो। वास्तवमा दुई देशबीचको सम्बन्ध सदियौं अघिदेखि विकसित भएको हो। अब नयाँ पुस्ताले यो सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्दै जानुपर्छ। रक्षामन्त्रीसँगको भेटमा पनि मैले नेपाली र चिनियाँ विद्यार्थी तथा पर्यटक एक अर्काका देशमा पढ्न र घुम्न जाने भएकाले जनस्तरमा सम्बन्ध गहिरो हुँदै गएको बताएँ। अझ चिनियाँ नयाँ पुस्ता वैदेशिक भ्रमणमा जाने गरेकोले सगरमाथा, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई सम्झेर नेपाल गइदिनुपर्‍यो, यसबाट जनस्तरमा सम्बन्ध विकसित हुन्छ र अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनमा पनि सहयोग पुग्छ भनेँ, रक्षामन्त्रीले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिए।
नेपालको राजनीतिक परिस्थितिबारे पनि कुरा भयो होला नि?
नेपाली जनताद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुले नयाँ संविधान जारी गरेकोमा चीन सरकार र चिनियाँ जनताका तर्फबाट पूर्ण समर्थन रहेको बताए रक्षामन्त्रीले। मैले पनि नयाँ संविधान जारी गरेपछि सबै मुलुकमा सुरुमा केही न केही समस्या देखिने गरेको र नेपालको अवस्था पनि त्यही रहेको बताएँ। नेपालको अखण्डता र नेपाली जनता नै मालिक हुनेबाहेक संवैधानिक प्रक्रिया वा जनमतसंग्रहबाट संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भनेँ। धेरै संघर्षलाई समेटेर सम्झौताको दस्तावजेको रुपमा संविधान आएकाले भविष्यमा कमी कमजोरी सुल्झाउँदै जान सकिन्छ भनेँ।
प्रकाशित २७ असोज २०७३, बिहिबार | 2016-10-13 20:48:01